Colaad ka taagnayd Mudug oo heshiis laga gaaray – news
Colaad ka taagnayd Mudug oo heshiis laga gaaray
Beelaha ayaa heshiis ku gaarey shir ay ku yeesheen degmada Galdogob, iyagoo hadda kaa shaqeynaya dhameynta Colaadda u dhexeysay oo dad badan oo shacab ah ay ku dhinteen.
GAALKACYO, Soomaaliya - Beello dega galbeedka gobolka Mudug ayaa heshiis nabadeed ku gaarey degmada Galdogob, kaasi oo lagu soo afjarayo dagaal mudo labo sano socday oo dhinacyada u dhaxeeya.
Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ayaa ka qeyb-qaatey deminta dagaalka, waxayna ku guuleysteen inay dhex-dhigaan labada beelood heshiis dhameystiran, oo nabad lagu dhex-dhigayo beelahan walaalaha ah, oo isku hayay arrimo muran dhinaca dhulka iyo aanooyin la xiriirra.
Wararka ayaa sheegaya in heshiiska lagu kala qaatay magta 26 qof oo ku dhintay dagaalkii u dhexeeyay beelaha. Goobaha dagaalka waxaa lagu daadgureeyay Ciidamo ka yimid dhinaca waqooyiga Gaalkacyo.
Maamulka Puntland oo degaanka Galdogob ayaa soo dhaweeyay heshiiska, waxayna Saraakiisha gobolka Mudug sameynayaan dedaallo hubka-dhigis ah iyo soo celinta dadkii shacabka ahaa ee ka barakacay degaanadooda intii uu dagaalka socday.